जान्नेले केरा पायो, बोक्रैसित खायो ! जान्नुहोस् बोक्रैसहित केराको फाइदा – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ स्वास्थ्य ∕ जान्नेले केरा पायो, बोक्रैसित खायो ! जान्नुहोस् बोक्रैसहित केराको फाइदा
जान्नेले केरा पायो, बोक्रैसित खायो ! जान्नुहोस् बोक्रैसहित केराको फाइदा
दीप संञ्चार भदौ १६, २०७८ गते ६:३८ मा प्रकाशित
नेपालमा मात्रै नभएर सारा विश्वभरी नै अत्याधिक रुचाइने फलफूल हो केरा। तर अझसम्म हामीले केरालाई गलत तरिकाले खाँदै आएका रहेछौँ। नयाँ खोजबाट केराको बोक्रा पनि पोषिलो हुने पत्ता लागेको छ।
हो, केराको बोक्रा खान योग्य मात्रै होइन, यो शरीरको लागि पोषिलो र फाइदाजनक पनि हुन्छ। नेपालमा बुढापाकाहरूले केराको बोक्रा पनि खान हुन्छ भन्ने गर्थे, तर भित्रको गुलियो मीठो फल छोडेर बाहिरको टर्रो बोक्रा कसले पो खान्छ र रु
केराको भित्री फल नरम र गुलियो हुन्छ भने, यसको बोक्रा बाक्लो, रेसायुक्त र हलुका टर्रो हुने गर्दछ। त्यसैले केराको बोक्रालाई १० मिनेटसम्म पानीसँग उमाल्दा तापक्रमले बोक्रामा भएको रेसालाई नरम बनाउँछ र चपाएर खान योग्य बनाउँछ। साथसाथै, केरा जति पाकेको छ, त्यसको बोक्रा पनि उत्तिकै नरम र गुलियो हुँदै जान्छ। किनकि, फलफूल पाक्दै गएपछि त्यसले प्राकृतिक हर्मोन ‘इथाइलिन’ पैदा गराउँदछ, जुन गुलियो हुन्छ।
केरा पाक्दै गएपछि पैदा हुने इथाइलिनले त्यसमा भएको सुगर र फाइबरसँग पारस्परिक प्रतिक्रिया गर्दछ, जसले जटिल सुगरलाई सरल सुगरमा परिणत गर्दछ र ‘पेक्टिन’लाई टुक्र्याउँदछ। (पेक्टिन भनेको केराको बोक्रालाई कडा बनाउने रेसा हो) यसैक्रममा, अन्य हर्मोनहरूले बोक्राको हरीयो रङ्गलाई पहेँलो बनाउँदै अन्त्यमा खैरो बनाउँदछ।
केरा खानुका फाइदाहरू :
केराको भित्री फलमा, निम्न किसिमका पोषक तत्वहरू पाइन्छन्-
१२ प्रतिशत फाइबर- यसले हाम्रो पाचनप्रक्रियामा सहज गराउँदछ र मधुमेहको खतराबाट पनि कम गराउँदछ।
१७ प्रतिशत भिटामिन सी- यसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँदछ भने शारीरिक वृद्धि तथा विकासमा सहयोग गर्दछ।
२० प्रतिशत भिटामिन बी६- यसले खानालाई ऊर्जामा परिणत गर्ने शारीरिक क्षमतालाई विकास गर्दछ।
१२ प्रतिशत पोटासियम- यसले शरीरका कोष, तन्तु र अङ्गहरूलाको विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ।
८ प्रतिशत म्याग्नेसियम- यसले शरीरको ऊर्जा निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउँदछ भने ग्लुकोजको मात्रा र रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईँले केराको भित्री फलसँगै बाहिरको बोक्रा खानुभयो भने त्यसले माथि उल्लेखित पोषक तत्वहरूलाई २० प्रतिशतले बढाउँदछ। बोक्रामा धेरै मात्रामा भिटामिन बी६ र बी१२ पाइन्छ, साथै म्याग्नेसियम र पोटासियम पनि पाइन्छ साथै केहि मात्रा फाइबर र प्रोटिन पनि पाइन्छ।
केराको बोक्रा खाँदा शरीरलाई राम्रो त हुन्छ नै, साथै वातावरण सफा राख्न पनि मद्दत पुग्दछ। अनुमान गरेअनुसार, प्रतिव्यक्तिले एक वर्षमा लगभग ६ किलोग्राम केरा खाने गर्दछन्। एउटा मध्यम आकारको केराको तौल लगभग १३० ग्राम हुन्छ। यसरी प्रतिव्यक्तिले वर्षभरीमा लगभग ४६ वटा केरा खाने गर्दछ। अनि धेरैजसोले बोक्रालाई फाल्ने गर्दछन्, जसको मतलब जैविक फोहोर पनि बढ्दै जान्छ।
केराको बोक्रा खान रुचाउनुहुन्न भने, त्यसलाई बाहिर सडकमा नफाल्नुहोस्। त्यसको सट्टा करेसाबारी अथवा खेतबारीमा उपयोगी कम्पोष्ट मल बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।